မြန်မာ့ရိုးရာဆယ့်နှစ်လရာသီပွဲတော်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုသုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ကြမလဲ - For her Myanmar
အီးလိုမေးလာတော့မှ ယောင်ယောင်ဝါးဝါးတွေ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ
ယောင်းတို့ရေ… ကမ္ဘာကြီးက ရွာကြီးဖြစ်သွားပြီလို့တောင် ဆိုစမှတ်ပြုရတဲ့ ၂၁ရာစုကြီးမှာ လူမျိုးခြား ဘာသာစကားတွေကလည်း အထိုက်အလျောက် အရေးပါလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပေါ့။ အထိုက်အလျောက် ပွင့်လင်းမြင်သာလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ ရွှေပြည်ကြီးကို နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်း ဝင်လာကြတာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကများ မြန်မာစကားကို ရေလည်အောင် ပြောတတ်၊ဆိုတတ်မှ လာကြသလဲနော်… ဒီအခါမှာ ကိုယ်တွေဘက်ကလည်း သူတို့နဲ့ အလိုက်အထိုက် ပြောဆိုနိုင်အောင်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုပြီးပေါ်လာအောင်လို့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ထိုက်သင့်သလောက်တော့ သိထားရတော့မှာပေါ့…
ခုတလော အက်ဒ်မင် ကြားကြားနေရတာလေးတွေ ရှိတယ် ယောင်းတို့ရဲ့.. ဘာလဲဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်းက ပိတ်ရက်များတယ် မဟုတ်လား.. အဲတော့ ပိတ်ရက်တွေကို ဘာကြောင့်ပိတ်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ရှင်းပြရတာ အလုပ်တစ်လုပ်လေ…. အဲ့မှာမှ ကိုယ်က အဲ့ပိတ်ရက်ကို ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိရင် ဂွမ်းပြန်ရော 😀 နောက်တစ်ခုရှိသေးတာက ရိုးရာပွဲတော်တွေ.. သိတယ်မလား.. အက်ဒ်မင်တို့ ငယ်ငယ်က ကျက်ခဲ့ရတဲ့ တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လ ညောင်ရေသွန်းပွဲ စသဖြင့် အဲဒါတွေကိုလည်း စပ်စုစိန် နိုင်ငံခြားသားတွေက မေးမြန်းလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်မှာ ဟယ်.. ငါလည်း မသိဘူး.. ပြန်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်လို့ မဂွမ်းရအောင် အက်ဒ်မင်က ၁၂လရာသီ ပွဲတော်တွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလေး ဝေမျှပေးပါ့မယ်ယောင်းရေ.. (အမလေး.. ဒီနားရောက်လာဖို့ နိဒါန်းတွေ ချီလာရတာ မောလက်ထှာ L )
ဒါဆို တူတူ ကြည့်ကြရအောင်နော်..
၁။ တန်ခူးလ – သင်္ကြန်ပွဲ
ဒါကိုတော့ သူတို့က ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Thingyan လို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုရှင်းအောင် ပြောချင်ရင်တော့ Water Festival ပေါ့..
၂။ ကဆုန်လ – ညောင်ရေသွန်းပွဲ
ညောင်ရေသွန်းပွဲကျတော့ Watering Tree Festival လို့ ခေါ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… ဗောဓိညောင်ကျတော့ the sacred Bodhi tree ဒါမှမဟုတ် the tree of Enlightenment လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၃။ နယုန်လ – စာပြန်ပွဲ
စာပြန်ပွဲကို The Scriptual Examination လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Tipitaka Festival လို့လည်း တချို့တွေ သုံးနှုန်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ.. ဘုန်းကြီးကို Monk လို့ခေါ်ပြီး သီလရှင်ကို Nun လို့ခေါ်တာတော့ သိတယ်ဟုတ်? သံဃာကျတော့ရော?? သံဃာကျတော့ ပါဠိစကားလုံးမို့ Sangha လို့ပဲ အင်္ဂလိပ်လို အသံဖလှယ်ပြီး ထွက်ပါတယ်နော်.. ဟော.. ပိဋကတ်သုံးပုံ ကျတော့ Three Baskets of Learing လို့ ခေါ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
၄။ ဝါဆိုလ – ဝါဆိုပွဲ
ဒါများ Waso Festival လို့ ပြောလိုက်ရုံပဲမလားလို့ တွေးနေပြီလား 😀 တချို့က Robe Offering Festival လို့ သုံးနှုန်းကြတာ တွေ့ရသလို တချို့ကျတော့ ဝါဆိုကို Lenten season ရယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ Lenten ဆိုတာက ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြုအမူတွေကို ပြန်သုံးသပ်တာမျိုးပေါ့.. ဒီမှာမှ ကြုံကြိုက်လို့ ပြောရရင် တရားဟောတယ်ဆိုတာကို Sermon လို့ သုံးပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
၅။ ဝါခေါင်လ – စာရေးတံမဲပွဲ
ဒါတော့ မသိတော့ဘူးမလား 😛 .. Alms-Bowls Festival လို့ ခေါ်ပါသတဲ့ ယောင်းတို့ရေ… မဟာဒုက် မဲလို့လည်းဆိုကြတာကြောင့် Maha Dok Festival လို့ ပြောလည်း ရပါတယ်နော်..
၆။ တော်သလင်းလ – လှေပြိုင်ပွဲ
ဒါအလွယ်ဆုံးပဲ 😀 Boat Racing Festival သုံးလုံးတည်းနဲ့ ပြီးသွားပါပြီရှင်.. ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပြောချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ Regatta Festival လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်.. အဓိပ္ပာယ်က လှေပြိုင်ပွဲပါပဲ။
၇။ သီတင်းကျွတ်လ – မီးထွန်းပွဲ
အမယ် Thadigyut လို့ပြောလိုက်ရင် အကုန်နားလည်တယ် လို့တော့ မလုပ်နဲ့နော်… Festival of Lights လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အထွေအထူး ပြောစရာ မရှိပါဘူးရယ်..
၈။ တန်ဆောင်မုန်းလ – ကထိန်ပွဲ
အမယ် ကထိန်ကျ Festival of Offerings လို့ ခေါ်တယ်နော်.. တိတိကျကျမှ ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တန်ဆောင်မုန်းမှာ ပွဲ ၃ပွဲ ရှိတယ်ပေါ့.. Tazaungdaing Festival of Lights (တန်ဆောင်တိုင် မီးထွန်းပွဲ), Kyi Ma No Festival (ကျီးမနိုးပွဲ) နဲ့ Kahtein Thingan Offering Festival (ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ) ပေါ့.. အမယ်.. အဲ့မှာ ကထိန်သင်္ကန်းကို Kathina Robes လို့ အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ပါတယ် ယောင်းရေ..
၉။ နတ်တော်လ – စာဆိုပွဲ
ဒါကျ အတိုမရှိတော့ဘူးacelebration in honour of the literati လို့ပဲ ပြောကြတော့တယ်။ အမှန်က စာဆိုပွဲဆိုတာက စာပေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ရှေးဘုရင်တွေလက်ထက်က စာဆိုတော်တွေ ဥပမာ- နဝဒေးတို့ ၊ နတ်သျှင်နောင်တို့ ၊ စိန္တကျော်သူတို့ ၊ လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်ကြီးတို့ စသဖြင့် စသဖြင့် စာဆိုတော်တွေရဲ့ အမှတ်တရအနေနဲ့ လုပ်တာလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေက နိုင်ငံအနှံ့ခရီးသွားကြရင်း စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဟောပြောပွဲတွေလုပ်တာမို့ စာပေဟောပြောပွဲတွေ အများဆုံး ကျင်းပကြတဲ့ လ လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့..
၁၀။ ပြာသိုလ – မြင်းခင်းပွဲ
မြင်းခင်းပွဲကိုတော့ Equestrian Festival လို့ခေါ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ.. သူကျ ဒီဘက်ခေတ်မှာ သိပ်မရှိတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာ မရှိတော့ပါဘူးနော်…
၁၁။ တပို့တွဲလ – ထမနဲပွဲ
ကောက်ညှင်းကျ Sticky Rice လို့ခေါ်တာ သိပါရဲ့ ထမနဲကလည်း ကောက်ညှင်းလိုပဲဟာကို ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်မလား :3 Glutinous Rice လို့ ထမနဲကို ခေါ်ပါတယ် ယောင်းရေ.. ဒီတော့ ထမနဲပွဲကိုကျ Festival of Hta-ma-ne ဒါမှမဟုတ် Festival of Glutinous Rice လို့ ခေါ်တာပေါ့။
၁၂။ တပေါင်းလ – သဲပုံစေတီပွဲ
သဲပုံစေတီပွဲလို့ဆိုပေမဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဘုရားပွဲတွေပဲ ရှိတော့တာမို့ တပေါင်းတစ်လလုံးကို Month of Pagoda Festivals လို့ ခေါ်ပါတယ်နော်.. ဒီမှာ ဘုရားပွဲကို Pagoda Festivals လို့ ရိုးရိုးလေး သုံးသွားတာ တွေ့ရမှာပါ ယောင်းရေ..
ဒါဆိုရင်တော့ ၁၂လရာသီ ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော် စုံသွားလောက်ပါပြီ။ နောက်များမှပဲ တပ်မတော်နေ့တို့၊ အာဇာနည်နေ့တို့လို ပိတ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုသုံးနှုန်းရတယ်ဆိုတာလေး ရေးပေးပါတော့မယ်။ ယောင်းတို့သိထားတဲ့ပွဲတွေ ရှိရင်လည်း ပြန်ပြီးမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်..
Photo Reference: Emerald Travels
အီးလိုမေးလာတော့မှ ယောငျယောငျဝါးဝါးတှေ မဖွဈစခေငျြလို့ပါ
ယောငျးတို့ရေ… ကမ်ဘာကွီးက ရှာကွီးဖွဈသှားပွီလို့တောငျ ဆိုစမှတျပွုရတဲ့ ၂၁ရာစုကွီးမှာ လူမြိုးခွား ဘာသာစကားတှကေလညျး အထိုကျအလြောကျ အရေးပါလာပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားပေါ့။ အထိုကျအလြောကျ ပှငျ့လငျးမွငျသာလာတဲ့ ဒီနခေ့တျေရဲ့ ရှပွေညျကွီးကို နိုငျငံခွားသား ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေလညျး ဝငျလာကွတာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဘယျနိုငျငံခွားသားရငျးနှီးမွှုပျနှံသူကမြား မွနျမာစကားကို ရလေညျအောငျ ပွောတတျ၊ဆိုတတျမှ လာကွသလဲနျော… ဒီအခါမှာ ကိုယျတှဘေကျကလညျး သူတို့နဲ့ အလိုကျအထိုကျ ပွောဆိုနိုငျအောငျ၊ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးတှေ ပိုပွီးပျေါလာအောငျလို့ အင်ျဂလိပျစကားကို ထိုကျသငျ့သလောကျတော့ သိထားရတော့မှာပေါ့…
ခုတလော အကျဒျမငျ ကွားကွားနရေတာလေးတှေ ရှိတယျ ယောငျးတို့ရဲ့.. ဘာလဲဆိုတော့ ဒီရကျပိုငျးက ပိတျရကျမြားတယျ မဟုတျလား.. အဲတော့ ပိတျရကျတှကေို ဘာကွောငျ့ပိတျတယျဆိုတာ နိုငျငံခွားသားတှကေို ရှငျးပွရတာ အလုပျတဈလုပျလေ…. အဲ့မှာမှ ကိုယျက အဲ့ပိတျရကျကို ဘယျလိုချေါမှနျးမသိရငျ ဂှမျးပွနျရော 😀 နောကျတဈခုရှိသေးတာက ရိုးရာပှဲတျောတှေ.. သိတယျမလား.. အကျဒျမငျတို့ ငယျငယျက ကကျြခဲ့ရတဲ့ တနျခူးလ သွင်ျကနျပှဲ၊ ကဆုနျလ ညောငျရသှေနျးပှဲ စသဖွငျ့ အဲဒါတှကေိုလညျး စပျစုစိနျ နိုငျငံခွားသားတှကေ မေးမွနျးလာတဲ့အခါ ကိုယျ့ဘကျမှာ ဟယျ.. ငါလညျး မသိဘူး.. ပွနျကွညျ့လိုကျဦးမယျလို့ မဂှမျးရအောငျ အကျဒျမငျက ၁၂လရာသီ ပှဲတျောတှကေို အင်ျဂလိပျလို ဘယျလိုချေါတယျဆိုတာလေး ဝမြှေပေးပါ့မယျယောငျးရေ.. (အမလေး.. ဒီနားရောကျလာဖို့ နိဒါနျးတှေ ခြီလာရတာ မောလကျထှာ L )
ဒါဆို တူတူ ကွညျ့ကွရအောငျနျော..
၁။ တနျခူးလ – သွင်ျကနျပှဲ
ဒါကိုတော့ သူတို့က ရိုးရိုးရှငျးရှငျး Thingyan လို့ပဲ ချေါကွပါတယျ။ ဒီ့ထကျပိုရှငျးအောငျ ပွောခငျြရငျတော့ Water Festival ပေါ့..
၂။ ကဆုနျလ – ညောငျရသှေနျးပှဲ
ညောငျရသှေနျးပှဲကတြော့ Watering Tree Festival လို့ ချေါပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… ဗောဓိညောငျကတြော့ the sacred Bodhi tree ဒါမှမဟုတျ the tree of Enlightenment လို့ ချေါပါတယျ။
၃။ နယုနျလ – စာပွနျပှဲ
စာပွနျပှဲကို The Scriptual Examination လို့ ချေါပါတယျ။ Tipitaka Festival လို့လညျး တခြို့တှေ သုံးနှုနျးတာ တှရေ့ပါတယျ။ အဲ.. ဘုနျးကွီးကို Monk လို့ချေါပွီး သီလရှငျကို Nun လို့ချေါတာတော့ သိတယျဟုတျ? သံဃာကတြော့ရော?? သံဃာကတြော့ ပါဠိစကားလုံးမို့ Sangha လို့ပဲ အင်ျဂလိပျလို အသံဖလှယျပွီး ထှကျပါတယျနျော.. ဟော.. ပိဋကတျသုံးပုံ ကတြော့ Three Baskets of Learing လို့ ချေါပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
၄။ ဝါဆိုလ – ဝါဆိုပှဲ
ဒါမြား Waso Festival လို့ ပွောလိုကျရုံပဲမလားလို့ တှေးနပွေီလား 😀 တခြို့က Robe Offering Festival လို့ သုံးနှုနျးကွတာ တှရေ့သလို တခြို့ကတြော့ ဝါဆိုကို Lenten season ရယျလို့ ချေါကွပါတယျ။ Lenten ဆိုတာက ကိုယျလုပျခဲ့တဲ့ အပွုအမူတှကေို ပွနျသုံးသပျတာမြိုးပေါ့.. ဒီမှာမှ ကွုံကွိုကျလို့ ပွောရရငျ တရားဟောတယျဆိုတာကို Sermon လို့ သုံးပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
၅။ ဝါခေါငျလ – စာရေးတံမဲပှဲ
ဒါတော့ မသိတော့ဘူးမလား 😛 .. Alms-Bowls Festival လို့ ချေါပါသတဲ့ ယောငျးတို့ရေ… မဟာဒုကျ မဲလို့လညျးဆိုကွတာကွောငျ့ Maha Dok Festival လို့ ပွောလညျး ရပါတယျနျော..
၆။ တျောသလငျးလ – လှပွေိုငျပှဲ
ဒါအလှယျဆုံးပဲ 😀 Boat Racing Festival သုံးလုံးတညျးနဲ့ ပွီးသှားပါပွီရှငျ.. ဒီ့ထကျပိုပွီး ပွောခငျြသေးတယျဆိုရငျတော့ Regatta Festival လို့ ပွောလို့ ရပါတယျ.. အဓိပ်ပာယျက လှပွေိုငျပှဲပါပဲ။
၇။ သီတငျးကြှတျလ – မီးထှနျးပှဲ
အမယျ Thadigyut လို့ပွောလိုကျရငျ အကုနျနားလညျတယျ လို့တော့ မလုပျနဲ့နျော… Festival of Lights လို့ ချေါပါတယျ။ ဒီမှာတော့ အထှအေထူး ပွောစရာ မရှိပါဘူးရယျ..
၈။ တနျဆောငျမုနျးလ – ကထိနျပှဲ
အမယျ ကထိနျကြ Festival of Offerings လို့ ချေါတယျနျော.. တိတိကကြမြှ ပွောခငျြတယျဆိုရငျတော့ တနျဆောငျမုနျးမှာ ပှဲ ၃ပှဲ ရှိတယျပေါ့.. Tazaungdaing Festival of Lights (တနျဆောငျတိုငျ မီးထှနျးပှဲ), Kyi Ma No Festival (ကြီးမနိုးပှဲ) နဲ့ Kahtein Thingan Offering Festival (ကထိနျသင်ျကနျးကပျလှူပှဲ) ပေါ့.. အမယျ.. အဲ့မှာ ကထိနျသင်ျကနျးကို Kathina Robes လို့ အင်ျဂလိပျလိုချေါပါတယျ ယောငျးရေ..
၉။ နတျတျောလ – စာဆိုပှဲ
ဒါကြ အတိုမရှိတော့ဘူးacelebration in honour of the literati လို့ပဲ ပွောကွတော့တယျ။ အမှနျက စာဆိုပှဲဆိုတာက စာပနေဲ့ပတျသကျခဲ့တဲ့ ရှေးဘုရငျတှလေကျထကျက စာဆိုတျောတှေ ဥပမာ- နဝဒေးတို့ ၊ နတျသြှငျနောငျတို့ ၊ စိန်တကြျောသူတို့ ၊ လကျဝဲသုန်ဒရအမတျကွီးတို့ စသဖွငျ့ စသဖွငျ့ စာဆိုတျောတှရေဲ့ အမှတျတရအနနေဲ့ လုပျတာလို့ ဖတျဖူးတယျ။ ဒီဘကျခတျေမှာတော့ စာရေးဆရာတှေ၊ ကဗြာဆရာတှကေ နိုငျငံအနှံ့ခရီးသှားကွရငျး စာပနေဲ့ပတျသကျတဲ့ ဟောပွောပှဲတှလေုပျတာမို့ စာပဟေောပွောပှဲတှေ အမြားဆုံး ကငျြးပကွတဲ့ လ လို့ပဲ ပွောရတော့မှာပေါ့..
၁၀။ ပွာသိုလ – မွငျးခငျးပှဲ
မွငျးခငျးပှဲကိုတော့ Equestrian Festival လို့ချေါပါတယျ ယောငျးတို့ရေ.. သူကြ ဒီဘကျခတျေမှာ သိပျမရှိတော့ ထှထှေထေူးထူးပွောစရာ မရှိတော့ပါဘူးနျော…
၁၁။ တပို့တှဲလ – ထမနဲပှဲ
ကောကျညှငျးကြ Sticky Rice လို့ချေါတာ သိပါရဲ့ ထမနဲကလညျး ကောကျညှငျးလိုပဲဟာကို ဒါပမေဲ့ ဘယျလိုချေါမှနျးမသိဘူး ဖွဈနတေယျမလား :3 Glutinous Rice လို့ ထမနဲကို ချေါပါတယျ ယောငျးရေ.. ဒီတော့ ထမနဲပှဲကိုကြ Festival of Hta-ma-ne ဒါမှမဟုတျ Festival of Glutinous Rice လို့ ချေါတာပေါ့။
၁၂။ တပေါငျးလ – သဲပုံစတေီပှဲ
သဲပုံစတေီပှဲလို့ဆိုပမေဲ့ ဒီဘကျခတျေမှာ ဘုရားပှဲတှပေဲ ရှိတော့တာမို့ တပေါငျးတဈလလုံးကို Month of Pagoda Festivals လို့ ချေါပါတယျနျော.. ဒီမှာ ဘုရားပှဲကို Pagoda Festivals လို့ ရိုးရိုးလေး သုံးသှားတာ တှရေ့မှာပါ ယောငျးရေ..
ဒါဆိုရငျတော့ ၁၂လရာသီ ပှဲတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး တျောတျော စုံသှားလောကျပါပွီ။ နောကျမြားမှပဲ တပျမတျောနတေို့၊ အာဇာနညျနတေို့လို ပိတျရကျတှကေို ဘယျလိုသုံးနှုနျးရတယျဆိုတာလေး ရေးပေးပါတော့မယျ။ ယောငျးတို့သိထားတဲ့ပှဲတှေ ရှိရငျလညျး ပွနျပွီးမြှဝပေေးခဲ့ပါဦးနျော..
Tags: kason, Knowledge, language, nayon, Thingyan, wa khaung, waso